Xukuumada Somaliland Oo Warar Is Khilaafsan ka Soo Saartay Cida Sii Daysay Markabkii Xoolaha Siday Ee Ku Xayirnaa Sucuudiga
Saturday June, 06 2020 - 01:48:48
Monday July 15, 2019 - 18:20:45 in by salman abdi
Xukuumada somaliland ayaa warar is khilaafsan ka soo saartay cida ku guulaysatay in xayiraadii laga qaado markabkii xoolaha ka raray dekeda Berbera ee ku xayirnaa wadanka Sucuudiga.
Wasiir ku xigeenka wasaarada arimaha dibada soomaliland Cabdiqaadir Cumar Jaamac ayaa sheegay in ganacsato reer somaliland ah oo ku sugan wadanka Sucuudigu ay ku guulaysteen inay xayiraada ka qaadaan markabkii xoolaha.
Sidoo kale wasiir ku xigeenku waxa uu meesha ka saaray dooda soomaaliya ee sheegaysa in raysal wasaare ku xigeenku ku guulaystay inuu xayiraadii ka qaaday markabkii siday xoolaha.
Wasiir ku xigeenka ayaa ku dooday sidan "Arinta raysal wasaare ku xigeenku sheegayo waxba kama jiraan waana arin been ah balse waxa arinta ka hawl galay dad badan oo tujaar ah ganacsatada somaliland ah kuwaas oo jooga dalka Sucuudiga laakiin arintaas uu sheegay raysal wasaare ku xigeenku waxba kama jiraan.” Ayuu yidhi wasiir ku xigeenka arimaha dibada soomaliland Cabdiqaadir Cumar Jaamac oo la haday Bulshotv.
Dhinaca kale golaha wasiirada somaliland oo shir deg deg ah yeeshay ayaa war ay madaxtooyadu ka soo saartay kulankooda waxay ku sheegtay in markabkii xoolaha xayiraada lagaga qaaday dedaalo ay samaysay dawlada somaliland waxaanu lagu yidhi warka "Fadhi aan caadi ahayn oo ay golaha wasiirradda Somaliland maanta yeesheen ayaa lagu lafo-guray weerarka siyaasadeed iyo dhaqaale ee maamulka muqdisho ku hayo Jamhuuriyadda Somaliland, oo ay ugu danbaysay dacwaddii iyo dagaalkii ay u galeen sidii aanay xoolaha Somaliland u dhoofi lahayn, taasoo markhaati cad u ah carqaladaynta dhaqaalaha somaliland, balse dedaal dheer oo dawladda Somaliland ka gashay sii daynta xoolahaasi ay ka degeen dalka sucuudiga.
Dhawaaqyada kala duwan ee xukuumada somaliland ka soo baxay ayaa muujinaya inaanay wali hayn xogta rasmiga ah ee ku saabsan cida xayiraadii ka qaaday markabkii xoolaha ee ku xayirnaa dekeda Jidah ee dalka Sucuudiga.